FIFANAKALOZANA ATY AFRIKA: Nohatsaraina ny lalàna mifehy ny fitaterana – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:51
Nitondra fanampim-panazavana ny Minisitry ny Fitsarana omaly.
Accueil/Politika/FIFANAKALOZANA ATY AFRIKA: Nohatsaraina ny lalàna mifehy ny fitaterana
80%-n’ny entam-barotra mifamezivezy aty Afrika, sy ny 90%-n’ny fifamezivezen’ny olona dia saika hatao amin’ny alalan’ny fitaterana an-tanety avokoa. Nisy ny dinika teo amin’ireo tompon’andraikitra ambony isan-tsokajiny eo amin’ny sehatry ny lalàna aty Afrika mahakasika izany, nentina nanatsarana ny lalàna mifehy ny fitaterana amin’ny ankapobeny.
Lucien R. 19 septembre 2020
Amin’ity taona ity, i Madagasikara no mitarika ny Comesa. Izay no nahatonga ny Madagasikara, tamin’ny alalan’ny minisitry ny Fitsarana, Andriamahefarivo Johnny Richard, nitarika ny fivorian’ny “Comité tripartite”, ikambanan’ireo firenena mikambana ao amin’ny Sadc, ireo firenena aty afrika atsinanana, ary ao amin’ny Comesa. Nisy, araka izany, ny fivoriana natao nanomboka 16 Septambra teo izay nanapahana hevitra mikasika ny “Instrument juridique”, na antontan-taratasy mamehifehy sy mametra ny resaka lalàna, indrindra mahakasika ny fifamoivoizana sy ny fitaterana, eto amin’ny kaontinanta afrikanina, ka mahafehy an’ireo firenena voalaza fa mpikambana ao anatin’ny Comesa, Sadc, Comité de l’Afrique de l’Est. Tanjona ny hahazoan’ny Firenena rehetra mpikambana ao amin’ireo vondrona ireo fivoarana amin’ny alalan’ny fitaterana.
Antoka iray hahafahana mampandroso ny sehatry ny fitaterana satria mitarika fivezivezena, izay tsy ny olona ihany no voakasika, fa ny entam-barotra koa. Etsy ankilany, tanjon’ny fivoriana koa ny hananana lalàna iray ikambanana ary mifehy ireo taranja rehetra izay mety ho voakasik’izany sehatry ny fitaterana izany, manomboka amin’ny kely indrindra izany, toy ny fahazoan-dalana mamily fiara, ny sazy mety ho azo raha misy fandikan-dalàna. Vina ihany koa ny hametrahana ny lalàna izay mifanaraka amin’ny fifanarahana rehetra ao anatin’ny firenena mikambana. Tafiditra ao anatin’izany ohatra ny fitondrana zava-mahadomelina. Tokony hitovy avokoa, hoy ny minisitra, ny fomba fijery sy ny fomba fanoratana ireny lalàna ireny. Ary tokony hampidirina amin’ny lalàna mifehy ny firenena tsirairay avy. Tsara anefa ny manamarika fa samy manana ny fahaleovantenany ireo firenena tsirairay na eo aza ny fisian’ny vondrona sy ny fifanarahana. Tolo-dalàna fito, noho izany, no nodinihana nandritra ny fivoriana, izay nifarana omaly. Ireo tolo-dalàna lany ireo izay hatolotra ny Filankevitry ny minisitry ny komity teknika, mba hahafahana manao ny fankatoavana farany. Tsara ho fantatra fa nandritra ny telo andro ny fivoriana natao. Ny voalohany izay nataon’ireo teknisianina ambony aty amin’ny kaontinanta afrikanina, ary nandray anjara tamin’izany Madagasikara.
FANOVANA VOKA-PIFIDIANANA KAOMINALY TANY NOSY BE: Mamofompofona kolikoly, hanokafana fanadihadiana ny Mpitsara namoaka didy
FANAFIHAN-JIOLAHY MAHERY VAIKA : Trano roa nodorana, valo mianaka maty may, iray maty voatifitra
FANABEAZANA: Ny fandehanana an-tsekoly no miato, fa ny fampianarana mitohy
FITSINJARAM-PAHEFANA SY FAMPANDROSOANA : Hatsaraina sy hafainganina ny fomba fiasan’ireo Governoram-paritra